I-Dongcheng District Forest Peninsula Liter and Art Two Bedroom - I-Airbnb
I-Dongcheng District Forest Peninsula Liter and Art Two Bedroom
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu惠云
Ebusika kwafika, i-ginkgo igqume kwindlela yelifu emfusa yasekuhlaleni yaba yigolide, ilula ibe ngumgama omde, iphelise i-Xiao Xiao yasebusika, njengento eyenza kufudumale, ukuze ifudumale.Ukuhonjiswa kwesitayile seNordic, izixhobo zasendlini ezinophawu, iifenitshala zasekhaya, akukho zinto zihonjisiweyo, kodwa zitofotofo, zisebenziseka lula, kwaye zikwizinga eliphezulu, zijolise kumgangatho wobomi obuthandayo, ummelwane uxhotyiswe ngokupheleleyo, indalo ejikelezileyo intle, kwaye ezothutho zifumaneka lula.
Iindawo zokuhlala, amagumbi okulala amabini neeholo ezimbini, umgangatho omncinci ophakamileyo, ilanga elininzi, umantla ukuya kumzantsi.Indawo ekufutshane ilungele ezothutho, indawo evalekileyo ekwizinga eliphezulu, indawo ekuyo indlu ikufutshane kakhulu negeyithi, kwaye kukho ivenkile enkulu ekufutshane, ngoko ubomi buyafumaneka.Ubusika buyeza kwaye indlu ifudumele kwaye ivulekile ukuze ifudumale yonke intsapho. Ekwindla, i-ginkgo ishiya emnyango we-gleam yegolide emthubi, ibonakala ngathi ziindawo ezimbini ezifudumeleyo eziya kumgama.
Izitrato ezibanzi neziqoqoshiweyo, izinto eziluhlaza, i-moat enamanzi ehamba kancinci, iintyatyambo ezisentwasahlobo, iintyatyambo zasehlotyeni, amagqabi ekwindla kunye neepleyiti, ezaliswe ziindawo ezintle.
Umbuki zindwendwe ngu- 惠云
Ungaqhakamshelana nam ngefowuni okanye nge-WeChat. Zive ukhululekile ukunxibelelana nam nanini na.